Minisitra Bartlett: Misedra firoboroboan'ny hotely lehibe indrindra ao anatin'ny herintaona i Jamaika
Taorian'ny fihaonana tamin'ireo tompon'ny trano fandraisam-bahiny sy toeram-pialan-tsasatra espaniola any Jamaika, any Madrid, Espaina, ny minisitry ny fizahantany Edmund Bartlett (2nd l, foreground), Senior Advisor & Strategist Delano Seiveright (l), ary Chevannes Barragan De Luyz (faharoa miankavia. , laharana faharoa), Business Development Officer, Jamaica Tourist Board (JTB), Continental Europe mizara sary miaraka amin'ireo hotely. Bahia Principe, Iberostar, H10, Melia, RIU, Secrets, Blue Diamond Resorts, Grand Palladium, ary Excellence dia anisan'ireo mpandraharaha amin'ny toeram-pitsangatsanganana, miaraka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny 8,000 mahery any Jamaika. Orinasa maromaro no nilaza ny fikasana hanitarana ny toeram-ponenan'izy ireo any Jamaika, izay hampitombo ny fidiram-bola, ny asa ary ny fifandraisana ara-toekarena manerana ny nosy.
Minisitry ny fizahantany, Hon. Edmund Bartlett dia nanambara fa i Jamaika dia mandalo ny firoboroboana lehibe indrindra amin'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny ao anatin'ny herintaona, miaraka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny 8,000 fanampiny amin'ny dingana samihafa amin'ny fampandrosoana sy ny drafitra, ny ankamaroany dia tarihin'ny mpampiasa vola Eoropeana.
Ny minisitra Bartlett nanazava fa 2 lavitrisa dolara ny fitambaran’ny vola hampiasaina mba hampandehanana ireo efitrano 8,000 24,000, ka hahazo asa tapa-potoana sy manontolo andro farafahakeliny 12,000 XNUMX ary asa XNUMX XNUMX fara-fahakeliny ho an’ny mpiasan’ny fanorenana.
Noho ny halehiben'ny fampiasam-bola, Bartlett Naneho ny ilàna ny fandrindrana tsy misy fotony, tarihin’ny Praiminisitra, Andriamatoa Filoha. Andrew Holness, ary koa ny fiaraha-miasa amin'ny ministera maro. Ny praiminisitra Holness sy ny Minisitra Bartlett dia voalahatra handray anjara amin'ny lanonana fidinana ifotony maromaro ao anatin'ny herinandro sy volana ho avy.
“Faly izahay amin'ny fivoaran'ny indostrian'ny fizahantany eto an-toerana, izay tsy isalasalana fa hisy fiantraikany tsara eo amin'ny toe-karena ary hitondra soa mivantana ho an'ny Jamaikana an'arivony. Eny tokoa, ny fizahan-tany dia indostrian'ny famatsiana izay mivelatra amin'ny sehatra ara-toekarena maro, ao anatin'izany ny fanorenana, fambolena, famokarana, banky ary fitaterana, "hoy i Bartlett.
Farafahakeliny mpiasa mpanao fanorenana 12,000, mpiantoka trano maro, injeniera, mpitantana ny tetikasa ary manam-pahaizana manokana maro hafa no ilaina mba hahazoana antoka ny fahavitan'ny fotoana ara-potoana ireo tetikasa ireo. Ankoatra izany, mpiasa an'arivony maro no tsy maintsy ampiofanina amin'ny sehatra toy ny fitantanana, ny sakafo, ny fikarakarana trano, ny mpitari-dalana, ary ny fandraisana », hoy izy.
Ny trano an-dalam-panamboarana amin'izao fotoana izao dia ahitana ny trano fandraisam-bahiny Princess Resort ao Hanover, izay ho lasa toeram-pialan-tsasatra lehibe indrindra ao Jamaika, ary efitrano efa ho 2,000 hafa ao amin'ny fampivoarana Hard Rock Resort marobe, izay tokony ahitana marika hotely telo farafahakeliny. Fanampin'izany, efitrano latsaky ny 2,000 no namboarin'ny Sandals and Beaches ao St. Ann.
Mandeha ihany koa ny drafitra ho an'ny Viva Wyndham Resort any avaratr'i Negril mba hanana efitrano 1,000, ny trano fandraisam-bahiny RIU vaovao ao Trelawny izay misy efitrano 700 eo ho eo, ary ny Secrets Resort vaovao ao amin'ny faritr'i Richmond ao St. Ann izay misy efitrano 700 eo ho eo. Bahia Principe koa dia nanambara drafitra fanitarana goavana, avy amin'ny tompony, Grupo Piñero, any Espaina.
Bartlett vao avy niverina avy endri-javatra, fampisehoana ara-barotra iraisam-pirenena isan-taona manan-danja indrindra eran-tany, any Madrid, Espaina. Raha teo izy dia nandray anjara tamin'ny andiana fivoriana avo lenta niaraka tamin'ireo mpampiasa vola Espaniola indrindra indrindra, izay manana toeram-pialan-tsasatra any Jamaika ny ankamaroany.
Bartlett, izay niaraka tamin'i Delano Seiveright, Mpanolo-tsaina zokiolona sy stratejika, dia nanamarika fa: "Mba hamitana amim-pahombiazana ireo tetikasa fampiasam-bola lehibe ao anatin'ny fotoana fohy, dia ilaina ny fomba fiasa rehetra miaraka amin'ny governemanta sy ny sehatra tsy miankina."
“Misongadina amin’ny fampandrosoana ihany koa ny fijerena ny tontolo iainana sy ny fiaraha-miasa amin’ireo tompon’andraikitra eo an-toerana. Ny Minisitra Bartlett dia nanendry ny Foiben'ny Fanavaozana ny fizahantany an'ny Tourism Enhancement Fund ao Jamaika mba handray fepetra stratejika mba hahazoana antoka fa ny fandaharan'asa fanofanana mpiasa mahomby sy fanamarinana dia miitatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo hotely izay nanome toky fa hiara-hiasa akaiky amin'ny governemanta amin'ity olana ity, "hoy i Seiveright.
More on: Jamaika | Resort | zava-baovao | Bahia | Edmund Bartlett | Tourism | Hotel
Abu Dhabi Tourism varavarana misokatra vaovao ho an'izao tontolo izao Tourism|
Hihaona amin'ny Birao Mpanatanteraka PATA vaovao Tourism|
Fironana Maneran-tany any Azia-Pasifika Tourism|
Ny Jumeirah Group dia manokatra trano fandraisam-bahiny rehetra ao Bali
Nidina 28.1% tamin'ny Aprily 2022 ny hetsika fanaovana fifanarahana fitsangatsanganana sy fizahan-tany
Previous Dr. R. Kenneth Romer no nantsoina ho tale jeneraly lefitry ny Minisiteran'ny Fizahantany, Fampiasam-bola & Aviation Bahamas
Manaraka Mpizahatany holandey voatazona rehefa avy nanao fiarahabana Nazi tany Auschwitz